7 mutsauko pakati peApple Watch Series 1 uye Series 2 | Ndinobva mac
7 mutsauko pakati peApple Watch Series 1 uye Series 2
Isu tatoona kushambadza uye kushambadzira uko Apple yakaratidza nekuisa kune internet. Unevo ivo vaviri pawebhusaiti yavo uye pane akasiyana makambani eYouTube chiteshi. Vanotiratidza wachi yekambani uye zvimwe zvekushandisa zvaunogona kuita nazvo, sekushambira, mitambo, kushandisa GPS uye zvimwe zvakawanda. Mushure mezvose, Apple Watch ndeyemafashoni inowoneka uye yakanaka chiitiko chemuviri uye hutano mita. Hatigone kubvunza zvakawanda kubva kwauri.
Chero chii zvacho. Pazasi pane runyorwa rwe 7 yakatsanangura hunhu hunoita mutsauko chaiwo pakati pezvizvarwa zvese izvi wenguva. Kana iwe uine kusahadzika. Zvakare, ndeupi muenzaniso waunofanira kutenga nhasi? Ose ari kutengeswa uye musiyano wemutengo wakakosha. Usapotsa, ramba uchiverenga.
1 7 mutsauko pakati peApple Watch Series 1 uye 2
2 Ndeupi unokurudzirwa pane izvi zviviri?
7 mutsauko pakati peApple Watch Series 1 uye 2
Ehezve ini ndasarudza nhamba 7 yeiyo runyorwa rwekusvika kweiyo iPhone 7 uye 7 kuwedzera. Matemu maviri anoshamisa anomiririra shanduko kuchigadzirwa kunyangwe zvisingaite. Bhatani repamba, rakawedzera simba uye bhatiri, jack port kubviswa. Zvese izvi zvepasirese tambo, sekutaura kwaApple. Asi ini handidi kutaura nezve iyo iPhone, asi nezve iyo Apple Watch. Aya ndiwo mutsauko uripo pakati pezvizvarwa zviviri zvaunogona kuwana kana kuchengetera nhasi:
GPS. Hapana chakataurwa nezve barometer. Ndicho chimwe chiitiko chatiri kushaikwa. Isu takagutsikana neGPS, iyo isiri yakaipa zvachose uye vese vashandisi vaida izvozvo.
Kuramba kwemvura uye iri kunyura kusvika pamamita makumi mashanu. Kunyangwe pagungwa. Chimwe chinhu chakanakira chishandiso chako pachako. Kwete kunyangwe pamhenderekedzo yegungwa iwe uchafanirwa kuitora. Yakanakira kushambira, kufura pamusoro kana chero chiitiko chemitambo yemvura. Ehezve, kana chinhu chako chiri scuba diving ... chenjera nemakumi mashanu emamita ekudzika.
Chidzitiro chine inopfuura kaviri kupenya. Mune chero mamiriro ezvinhu zvinotaridzika zvakanaka, ehe, chenjera nebhatiri. Ini ndichataura nezve izvi pazasi.
Chip nyowani ine GPS yakasanganiswa. Izvi zvinofungidzira a kuwedzera kukuru kwesimba.
Bhatiri rakawanda, kunyangwe huku dzinopinda neidzo dzinobuda. Iyo GPS uye kuwedzera kwekupenya zvinoita kuti isu tirege kuona iro rekuwedzera bhatiri. Kwatiri icharamba ichigara zvakafanana, asi nekuvandudza mashandisiro. Kuti uzive zvimwe zvakawanda isu tichafanirwa kumirira kuti tione mavhidhiyo uye kuenzanisa kwevashandisi ivo pachavo.
Hapasisina yemhando yegoridhe. Iyo Apple Watch Edition ikozvino yakachena ceramic ceramic. Ndarama uye yakasimuka goridhe yabviswa pamusika.
Mutengo. Zvinodhura kupfuura kunyangwe iyo yekutanga payakatengesa. Chikonzero chikuru nei ndisiri kuzotenga.
Ndeupi unokurudzirwa pane izvi zviviri?
Zvakanaka, akateedzana 1 anoshanduka kuve asina kushata zvachose. NaWatchOS 2 yakashanda zvirinani uye neWatchOS 3 ivo vakakwanisa kuiunza kuhupenyu zvakare. Pasina kudiwa kwehardware nyowani, inoshanda zvakanyanya. MuSpain unogona kuiwana kubva kungangoita € 330, iyo haina kushata zvachose, uye ine bhatiri rakafanana uye rinenge simba senge dzakateedzana 2, chete isina GPS, isina kupenya kudiki uye ese misiyano yakatsanangurwa pamusoro. Kana iwe uchida Apple Watch asi usingashandisi yakawandisa uye iwe usina basa kuti haina kunyudza (kunyangwe iine kuramba kwemvura), pamwe sarudzo yako yakanakisa ndeye akateedzana 1. Kana izvo zvaunoda zviri izvo zvitsva uye zvazvino uye zvine simba terminal, uyezve zvirinani Series 2.
Kubva dhizaini, ukobvu uye kutaridzika zvakafananaHatina ruzivo rwekutibatsira kusarudza mune izvozvi. Iyo ipfungwa inopesana nechizvarwa chechipiri. Izvo zvinodhura asi misiyano yacho ishoma uye ingangoita inosungirwa muchigadzirwa chakadai nemutengo wakadai. Ndine chokwadi chekuti isu tichafanirwa kumirira mamwe makore akati wandei kuti tione yakazara uye yakasiyana Apple Watch. Imwe yatinonyatsodanana nayo uye inondikurudzira kuitenga kubva pazuva rekutanga painotengeswa. Parizvino ini handina kugutsikana neakateedzana 1 kana akateedzana 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 7 mutsauko pakati peApple Watch Series 1 uye Series 2
Vhidhiyo kuGIF Gadzira yemahara kwenguva pfupi
Vhidhiyo inokosha yaSeptember 7 yave kuwanikwa paYouTube